Falls Amerika Atsimo, riandrano mahavariana | Vaovao momba ny dia
Riandranon'i Amerika atsimo: riandrano manaitra
Maria Jose Roldan | | America, Arzantina, Brasil, Toerana fitsangatsanganana, Peru
Amerika atsimo dia fonenan'ny tontolo voajanahary tsara tarehy miparitaka amin'ny morontsiraka, tendrombohitra ary ala. Ny rano, harena sarobidy toy izany ankehitriny, dia mitety ny kaontinanta mamakivaky ny renirano, ony, loharano, riandrano ary riandrano. Amin'izao fotoana izao indrindra dia te hampahafantatra ireo riandrano mahafinaritra sy manaitra izay ananan'ny kaontinanta Amerika Latina isika.
Ilaina ny mikarakara dia mankany amin'ireo tany ireo mba hahitan'ny masonao fotsiny ireo zava-mahatalanjona atolotry ny natiora antsika. Inona koa, any Amerika atsimo dia fantatr'izy ireo fa mahafinaritra tokoa ny riandrano ary misy hotely izay mandamina ny dia miala amin'ny hotely mba hanamorana ny dia sy ny fitsidihan'ny mpanjifany.
Aorian'izay dia hasehoko anao ny sasany amin'ireo riandrano ireo, ankoatry ny tsy mampino, dia manaitra ary raha mahita azy ireo miaina ianao dia tsy ho miraharaha. Ho traikefa iray izay ho voasokitra mandritra ny androm-piainany ao an-tsainao sy ny fonao!
1 Ny renirano Iguazu
2 Ny tendan'ny devoly
3 Ny riandranon'i Kaieteur
4 Ny fitsangatsanganan'ny anjely
5 Ny riandrano manga
6 Riandrano sasany any peroa
7 Mendrika jerena izy ireo
Ny renirano Iguazu
Tsy misy isalasalana, ny tena mametraka ny rehetra ary heverina ho avo indrindra eto an-tany dia ny Riandranon'i Iguazú. Ireto riandrano ireto dia fanomezana voajanahary tokoa eo amin'i Brezila sy Arzantina izay olona maro no nanam-bintana hahita mivantana, maninona ianao no ho tsara kokoa? Mendrika jerena izy ireo!
Ao amin'ny faritanin'i Misiones, eo amin'ny faritra atsimo, ary ao amin'ny Valan-javaboary Iguacu, any Paraná, ao amin'ny faritr'i Rio de Janeiro. Raha sahy ianao hitsidika an'ireto riandrano 275 manana haavo 80 metatra, Manoro hevitra anao izahay handeha mandritra ny vanim-potoana manomboka amin'ny Oktobra ka hatramin'ny Desambra mba hahafahanao mitondra ny sambo mitaingina any ambanin'ny riandrano tsy misy olana amin'ny orana. Ho gaga be ianao fa tsy hitahiry vola afa-tsy te hanana fotoana hiverenana miaraka amin'ireo olon-tianao ary azon'izy ireo atao ny misaintsaina an'io fahagagana voajanahary io.
Ny tendan'ny devoly
Ny riandrano mahavariana indrindra amin'ny rehetra dia ny Throat an'ny Devoly. Eo alohan'ity riandrano lehibe ity dia misy tetezana zahana fomba fijery iray avy amin'ny toerana azon'ny mpizahatany atao ny maka sary manaitra indrindra amin'ny fakan-tsary.
Ary tsy mahagaga izany, amin'ny teknolojia vaovao sy telefaona finday ary fakan-tsary izay mety mando nefa tsy manapotika na manimba, dia mendrika ny maka sary tsy mampino toa izao izay te hanova azy io ho lasa lamba ary hankafizinao azy amin'ny haingon-tranoo. Iza no tsy tia ny hevitra momba ny fahatsiarovana dia mahafinaritra amin'ny endrika tsy mampino?
Ny riandranon'i Kaieteur
Andao hanova ny faritra ara-jeografika ary hankany Guyana. Iray amin'ireo manintona mpizaha tany indrindra amin'ity faritany ity ny riandranon'i Kaieteur mahafinaritra, izay nodinihin'i maro toy ny iray amin'ireo mahavariana indrindra eto an-tany noho ny fianjerany 226 metatra avo tsy misy fetra. Azonao an-tsaina ve ny halavany? Mila mampitaha azy ireo amin'ny Niagara Falls fotsiny ianao hahafantarana fa avo 5 heny izy ireo… ny fahitana azy ireo mivantana dia fampisehoana rano, rivotra ary fahagagana tokoa!
Ny fitsangatsanganan'ny anjely
Avy any Guyana isika dia hifindra any amin'ny faritany akaiky, mankany Venezoela, manokana mankany amin'ny Valan-javaboary Canaima hahafantarana ny mpandeha voajanahary ambony indrindra aminy: Ny Angel Falls sy ny haavony 979 metatra, ary noho izany ny riandrano avo indrindra eto an-tany. Ny anarana dia efa manome topy maso antsika momba ny fomba tokony hisy an'ity karazana riandrano ity, sy ny fomba mahavariana izany. Mahavariana tokoa fa mila fakantsary lehibe sy halavirana be vao afaka maka ny habeny.
Ny riandrano manga
Tany Ekoatera dia nahita ny Reserve Shishink Nature Reserve sy ny Blue Waterfall-ny izahay. Na dia tsy tena mametraka ny habeny aza (25 metatra ny haavony), dia mbola mendrika ny hojerena ihany ny hijerena ny hakantony lehibe. Iza no milaza fa ny riandrano kely somary tsy feno famirapiratana? Ary ny fahalehibiazan'ny natiora dia tsy mahatakatra ny habeny, manome antsika fotoana handinihana ny hatsarany.
Riandrano sasany any peroa
Raha mandeha any Peroa ianao, dia tokony handany andro fanampiny amin'ny fitsidihanao hizaha riandranon-tendrombohitra toa an'i Velo de Ángel miaraka amin'ny fianjerana malalaka 28 metatra, ny Enchanted Siren sy ny 70 metatra ny haavony na ny riandrano San Miguel miaraka amin'ny haavony 100 metatra. Na izany aza, ny tena misongadina indrindra any an-tendrombohitra dia ny riandrano Parijaro miaraka amin'ny 250 metatra ny haavony, hita ao amin'ny Valan-javaboary Otishi.
Ao amin'ny faritra ala dia mahita riandrano toy ny rano mihomehy sy manjelanjelatra any Ahuashiyacu, ny Riandrano Velo de la Novia, na ny Riandrano Tirol izahay. Tsy dia lavitra any aoriana ny morontsirak'i Peroviana ary asehony antsika ny hakantony voajanahary amin'ny riandrano Pala Cala 20 metatra.
Mendrika jerena izy ireo
Ary raha tena te-hahita seho tsara tarehy toy izany ianao, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny mitady fialan-tsasatra lava hankafizanao ny lalan'ny riandrano tsara, saingy mazava ho azy ... midika izany fa ankoatry ny fanananao fotoana be dia be, tokony hanana vola ara-toekarena tsara ihany koa ianao hahafahana mandoa trano, mandehandeha amin'ny toerana iray, sakafo ... ary raha Avy any Espana ianao, mila manana vola be voatahiry satria tsy dia mora loatra ny dia an-habakabaka.
Saingy rehefa manapa-kevitra ianao ary manomboka mandamina ny dianao, dia manana ny toeram-ponenana na ny fomba nifanarahana hijanonana ianao ary hahatsapa fa kely sisa dia manakaiky ny andro fitsidihanao ... tsy isalasalana fa hanomboka hahatsapa ny hozatry ny fitsangatsanganana lehibe toy izany, hahafantarana toerana tsy mampino toy ny riandrano amin'ity karazana ity.
Ary koa, torohevitra vitsivitsy azoko omena anao (araka ny nolazaiko teo am-piandohan'ity lahatsoratra ity) dia raha te hankafy ireo fahagagana atolotry ny natiora anao ianao dia ataovy amin'ny dia voalamina avy amin'ny orinasa iray manam-pahaizana manokana amin'ity karazana fitsidihana ity. Hevitra iray hafa hahafantarana ireo toerana ireo ny fiarahana amin'ireo olon-tianao. Ny fankafizanao ireo fampisehoana natiora miaraka amin'ny fianakaviana akaiky indrindra sy namana dia zavatra niainana izay tsy isalasalana fa hiainanao ho tsy hay hadinoina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Arzantina » Riandranon'i Amerika atsimo: riandrano manaitra
Misaotra anao. Noho ny fampahalalana mahavariana anao dia tsy ilaozana i Peroa, tsy dia be ny riandrano mahafinaritra sy mahafinaritra–
Peroa ianao tsara!
Any Peroa, ny iray amin'ireo riandrano mankafy ny haavony dia ny Riandranon'i Gocta, sahabo ho 771 metatra ny haavony, noheverina ho iray amin'ireo dimy avo indrindra eran'izao tontolo izao.
Ankoatr'izay, ny toerana misy azy eo afovoan'ny ala Amazon dia mahatonga azy hahagaga ny natiora izay mendrika ho fantatra sy karakarain'izay rehetra mitsidika azy.